Baiboly pejy 5 - Ny Baiboly
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Manaraka Farany
Jenezy toko 8 (tohiny)
17Ento mivoaka miaraka aminao koa ny biby rehetra isan-karazany izay ao aminao, na vorona, na biby fiompy, ary ny biby rehetra mikisaka amin'ny tany: aoka hiely amin'ny tany ireny, ka ho maro anaka sy hihabetsaka eny ambonin'ny tany. 18Dia nivoaka Noe, izy sy ny zanany sy ny vadiny sy ny vinantovaviny. 19Ary nivoaka avy tao an-tsambo fiara ny biby rehetra, ny biby mikisaka rehetra mbamin'ny vorona rehetra, dia izao zava-mihetsiketsika rehetra eto ambonin'ny tany izao, samy araka ny karazany avy.
20Ary Noe dia nanorina otely ho an'ny Tompo, ka naka tamin'ny biby madio rehetra mbamin'ny vorona madio rehetra, dia nanolotra sorona dorana teo ambony otely. 21Dia nandre hanitra mahafinaritra Iaveh ka Iaveh nanao anakampo hoe: Tsy hanozona intsony ny tany aho noho ny olona; fa ratsy hatramin'ny fahatanorany ny fisainan'ny fon'ny olombelona; ary tsy mba hamono ny zavatra manan'aina rehetra toy izay nataoko izay intsony aho. 22Amin'izao sisa izao, raha mbola maharitra koa ny tany, dia tsy ho tapaka ny famafazana sy ny fijinjana, ny hatsiaka sy ny hafanàna, ny fahavaratra sy ny ririnina, ary ny andro sy ny alina.
28Mbola velona dimam-polo sy telon-jato taona Noe taorian'ny safo-drano. 29Ary dimam-polo sy sivin-jato taona ny andro rehetra niainan'i Noe, dia maty izy.
6Zanak'i Kama: Kosy, Mesraima, Fota, ary Kanaana. 7Zanak'i Kosy: Sabà, Hevilà, Sabatà, Regmà ary Sabatakà. Zanak'i Regma: Sabà sy Dadàna. 8Kosy niteraka an'i Nemroda, izay voalohan'olona manam-pahefana tamin'ny tany. 9Mpihaza mahery teo anatrehan'ny Tompo izy, ka izany no anaovan'ny olona hoe: Tahaka an'i Nemroda mpihaza mahery eo anatrehan'ny Tompo. 10Ny niandohan'ny fanjakany dia Babela, Aràka, Akada, ary Kalane any amin'ny tany Senaara. 11Avy ao amin'io tany io izy dia nankany Asora, ka nanorina an'i Niniva, Rekobota-Ira, Kale, 12ary Resena anelanelan'i Niniva sy Kale; io no ilay tanàna lehibe. 13Mesraima niteraka ny Lodima, ny Anamima, ny Laabima, ny Neftoima, 14ny Fetrosima, ny Kasloima, izay ihavian'ny Filistina ary ny Faftorima. 15Kanaana niteraka an'i Sidòna lahimatoany, sy Heta;
Pejy: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Manaraka Farany